Social Media and Mental Health | Prudential Myanmar
လူမှုကွန်ရက်နှင့် စိတ်ကျန်းမာရေး ဆက်နွယ်မှု
လူမှုကွန်ရက် ပလက်ဖောင်းတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Facebook အပါအဝင် Twitter ၊ Instagram ဒါမှမဟုတ် TikTok စတာတွေဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝကို စိုးမိုးနေပါပြီ။ ဒီနေ့ခေတ် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ လူမှုကွန်ရက် ပုံမှန်အသုံးပြုနေတဲ့သူ အရေအတွက် (၃.၈) ဘီလီယံကျော်ထိ ရှိနေပြီး အသုံးပြုသူ အများစုဟာ ဒီလူမှုကွန်ရက် ပလက်ဖောင်းတွေပေါ်မှာ ပျမ်းမျှ တစ်နေ့ (၄) နာရီခန့် ရှိနေတယ်လို့ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အဖွဲ့အစည်း OECD က အခိုင်အမာ ပြောဆိုထားပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်ကျော်က လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ လူမှုကွန်ရက် အသုံးပြုနှုန်းက စိတ်ကျန်းမာရေး ပိုပြီး ထိခိုက်နိုင်ခြေနဲ့ ဆက်စပ်နေတာ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ပဲင်စီလ်ဘေးနီးယား တက္ကသိုလ်က တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတွေကို အုပ်စုနှစ်စုခွဲပြီး လေ့လာမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ (အုပ်စုတစ်စုက ကျောင်းသားတွေကို Facebook ၊ Snapchat နဲ့ Instagram စတဲ့ လူမှုကွန်ရက်တွေ ပုံမှန် ဆက်အသုံးပြုခိုင်းထားပြီး ကျန်အုပ်စုတစ်ခုကို တစ်နေ့မှာ ၁၀ မိနစ်ပဲ လူမှုကွန်ရက် အသုံးပြုဖို့ အချိန်ကန့်သတ်လိုက်ပါတယ်) (၃) ပတ်အကြာမှာတော့ ကန့်သတ်ထားတဲ့ အုပ်စုက သူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် အသုံးပြုနှုန်းအရ အထီးကျန်မှုနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေ ပိုနည်းသွားကြောင်းကို အဆင့်တွေ သတ်မှတ်ပြီး တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
ပြီးတော့ အသက် (၁၉) နှစ်က (၃၂) နှစ်ကြားအရွယ် လူမှုကွန်ရက် သုံးစွဲသူတွေဟာ Facebook ၊ Twitter ၊ YouTube နဲ့ LinkedIn စတဲ့ လူမှုကွန်ရက် ပလက်ဖောင်းတွေကို တစ်ပတ်မှာ (၅၈) ကြိမ်ထက်မနည်း ဝင်ရောက်အသုံးပြုနေတာကြောင့် လူမှုကွန်ရက်ကို တစ်ပတ်မှာ (၉) ကြိမ်ခန့်ပဲ သုံးစွဲဖြစ်သူတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် အထီးကျန်ဆန်မှု ခံစားနေရနှုန်း (၃) ဆခန့် ပိုများနေတယ်လို့ နောက်ထပ်လေ့လာမှုတစ်ခုက ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဘယ်နှစ်ကြိမ် ဝင်ရောက်ပြီး အသုံးပြုနေတယ်ဆိုတာထက် ပလက်ဖောင်းတစ်ခုစီပေါ်မှာ အမှန်တကယ် ကုန်ဆုံးနေတဲ့ အချိန်က ပိုပြီး ဆိုးကျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
လူမှုကွန်ရက်က အထူးသဖြင့် ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးငယ်တွေရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ထိခိုက်နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။ လန်ဒန်မြို့က လူမှုကွန်ရက် အသုံးများတဲ့သူတွေထဲမှာ မိန်းကလေးနဲ့ ယောကျာ်းလေး ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အနိုင်ကျင့်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ပိုများတာ၊ အိပ်ချိန်နဲ့ ပြင်ပလှုပ်ရှားမှု နည်းတာတွေဟာ မိန်းကလေးတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်ပြီး ဒါက စိတ်ကျန်းမာရေး ပြဿနာဖြစ်ဖို့ ပိုပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်မားနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အနှောင့်အယှက်ခံရတာ၊ အိပ်ချိန်မမှန်တာ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်းလာတာ၊ ခန္ဓာကိုယ် ပုံပန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်ရှုံ့ချခံရတာ စတဲ့ အကျိုးဆက်တွေကြောင့် အသက် (၁၄) နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတွေဟာ ယောကျာ်းလေးတွေထက် စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေ ပိုခံစားနေရတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
လူမှုကွန်ရက် အသုံးပြုမှုက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဦးနှောက်ကို တိုက်ရိုက် သက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာ အောက်မှာပြထားတဲ့ ဗီဒီယိုကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း လူမှုကွန်ရက် သုံးတယ်ဆိုတိုင်း ဆိုးကျိုးတွေချည်းပဲလို့ တစ်ထစ်ချ ကောက်ချက်ချလိုက်ရတော့မှာလား
အမှန်တော့ ဒီလိုချည်းလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ လူမှုကွန်ရက်တွေက စိတ်ခံစားချက် ကောင်းမွန်ဖို့နဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ အကျိုးပြုတာလည်း ရှိပါတယ်။ အခုလို အိမ်ထဲမှာပိတ်နေပြီး သွားရေးလာရေး ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက မိသားစုတွေ၊ ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်စေဖို့ ပေါင်းကူးချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုလို ဖြစ်နေတာကလည်း ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပါပဲ။ ဒါ့အပြင် လူမှုကွန်ရက်ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ ဖန်တီးနိုင်စွမ်း၊ အတွေးအမြင်ကို ဖော်ပြနိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဝါသနာ၊ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခုအပေါ် ယုံကြည်မှု စတာတွေချင်း တူတဲ့သူ အချင်းချင်းကို ရှာဖွေချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
TikTok လိုမျိုး အချို့လူမှုကွန်ရက် ပလက်ဖောင်းတွေမှာ စိတ်ကျန်းမာရေး၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေနဲ့ စိတ်မလုံခြုံမှုတွေ ကြုံတွေ့နေရသူတွေကို သူတို့တစ်ဦးတည်း ခံစားနေရတာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်း သိအောင်ပြောပြပြီး ကူညီပေးနေတဲ့ လူမှုအသိုက်အဝန်းတစ်ခု ဖန်တီးပေးထားဖို့ အသုံးပြုလာကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ စိတ်ရောဂါကု ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့လည်း အများပြည်သူတွေကို အသိပညာပေးဖို့၊ စိတ်ထိခိုက်လွယ်သူတွေအတွက် စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ဝေမျှပေးဖို့ လူမှုကွန်ရက်ကို အသုံးချလာကြပါတယ်။
စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသိအပညာတွေ ရှိလာတဲ့အခါ လူမှုကွန်ရက် အသုံးပြုမှုနဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ ပြဿနာတွေ နည်းပါးသွားပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ လူမှုကွန်ရက် သုံးစွဲမှု အလေ့အထဟာ အသုံးပြုသူတွေရဲ့ လူမှုရေးဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်မှု၊ စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အသိနဲ့ ကျန်းမာရေး လိုက်စားမှုစတာတွေအပေါ်မှာ ကောင်းကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်လို့ The Harvard T.H. Chan School of Public Health က လေ့လာသုံးသပ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း လူမှုကွန်ရက် သုံးတယ်ဆိုတာ စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ သိသိသာ ဆက်နွယ်နေတယ်လို့ တစ်ဖက်က ပြန်တွေးကြည့်ရင်လည်း မှန်နိုင်ပါတယ်။ (ဥပမာ - လူမှုကွန်ရက် မသုံးတော့တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ကလွဲပြီး သူများတွေအကုန် ပျော်ရွှင်နေကြတော့မှာပဲဆိုပြီး စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ ဖြစ်လာပြီး သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ အဆက်အသွယ် ပြတ်သွားသလို ခံစားရတဲ့အတွက် အက်ပလီကေးရှင်းတွေကို ခဏခဏ စစ်ကြည့်နေတတ်တာမျိုး)
လူမှုကွန်ရက် အသုံးပြုမှုကို လုံးဝ ရပ်တန့်ပစ်မယ့်အစား ကိုယ် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဘယ်လောက်အထိ မကြာခဏ ရှိနေလဲဆိုတာ အမြဲ သတိထားနေပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို တခြားသူအပေါ် မမှီခိုဘဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးယူပါ
1. Chaffey D. Global social media research summary 2020. Smart Insights [Internet]. 2020 [cited 1 June 2020];. Available from: https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/
2. Ortiz-Ospina E. The rise of social media. Our World in Data [Internet]. 2019 [cited 1 June 2020];. Available from: https://ourworldindata.org/rise-of-social-media
3. Walton A. New Studies Show Just How Bad Social Media Is For Mental Health. Forbes [Internet]. 2018 [cited 1 June 2020];. Available from: https://www.forbes.com/sites/alicegwalton/2018/11/16/new-research-shows-just-how-bad-social-media-can-be-for-mental-health/#70d456e37af4
4. Mir E, Novas C. Social Media and Adolescents’ and Young Adults’ Mental Health. National Center for Health Research [Internet]. [cited 1 June 2020];. Available from: http://www.center4research.org/social-media-affects-mental-health/.
5. Viner R, Gireesh A, Stiglic N, Hudson L, Goddings A, Ward J et al. Roles of cyberbullying, sleep, and physical activity in mediating the effects of social media use on mental health and wellbeing among young people in England:asecondary analysis of longitudinal data. The Lancet Child & Adolescent Health [Internet]. 2019 [cited 1 June 2020];3(10):685-696. Available from: https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(19)30186-5/fulltext
6. Kelly Y, Zilanawala A, Booker C, Sacker A. Social Media Use and Adolescent Mental Health: Findings From the UK Millennium Cohort Study. EClinicalMedicine [Internet]. 2018 [cited 1 June 2020];6:59-68. Available from: https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(18)30060-9/fulltext
7. Robinson L, Smith M. Social Media and Mental Health. HelpGuide [Internet]. 2020 [cited 1 June 2020];. Available from: https://www.helpguide.org/articles/mental-health/social-media-and-mental-health.htm
8. Ao B, Silverman E. Teens are using TikTok to talk about mental health, relationship abuse, and sexuality. The Star [Internet]. 2020 [cited 1 June 2020];. Available from: https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2020/01/06/teens-are-using-tiktok-to-talk-about-mental-health-relationship-abuse-and-sexuality
9. Montemayor C. How Therapists Are Using TikTok to Reach Teens & Talk Mental Health. SheKnows [Internet]. 2020 [cited 1 June 2020];. Available from: https://www.sheknows.com/health-and-wellness/articles/2240591/tiktok-mental-healthcare-therapy/
10. Roeder A. Social media use can be positive for mental health and well-being. Harvard TH Chan School of Public Health [Internet]. 2020 [cited 1 June 2020];. Available from: https://www.hsph.harvard.edu/news/features/social-media-positive-mental-health/